येसा जलाशय | यात्रा समाचार
entre नाभ्रा र जारागोजा तपाईंले फोटोमा देख्नुहुने त्यहाँ भण्डार छ: यो Yesa जलाशय। तिमी मनपराउँछाै? यो एक सुन्दर परिदृश्य हो जुन यसको ईतिहास पनि छ, त्यसैले यदि तपाईं स्पेन पत्ता लगाउन योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यो उत्तम गन्तव्य छैन।
जलाशय बाँधको निर्माणको उत्पादन हो त्यसैले यो बाढी भूमि र हराएको शहरहरूको कहानी पनि हो। आज हामीले यसका जलाशय र यसको आकर्षणहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ।
1 एउटा जलाशयको इतिहास
2 येसा जलाशयमा पर्यटन
एउटा जलाशयको इतिहास
यी नदीहरू प्रयोग गर्न सक्दछन् जसले गर्दा तिनीहरूको पानीले ऊर्जा उत्पन्न गर्छ र त्यो अरगान नदीको बारेमा लामो विचार हो। यद्यपि यसको पानी सिंचाइका लागि सोच्नु अघि, २० औं शताब्दीमा यसको लक्ष्य बिजुली उर्जाको उत्पादन थियो।
प्रक्रिया लामो थियो, विभिन्न परियोजनाहरू आउँदा र अघि बढ्दै, तर अन्तमा यो जलाशय १ 1928 २40 मा निर्माण गर्न शुरू भयो। गृहयुद्धको दौडान १ 50 s० को दशकमा रंगशालामा फर्कने र १ XNUMX .० को अन्ततिर सबै काम समाप्त हुने काम रोकियो।
जब एउटा जलाशय बनाइन्छ जग्गाहरू सुख्खा हुन्छन् र बाँच्न सक्ने अन्य जमिनहरू हुन्छन्, त्यसैले यस अवस्थामा स्थितिले त्यो निर्धारण गर्‍यो धेरै गाउँहरू परित्याग गरियो। हेक्टर र राम्रो भूमि को हेक्टेयर डुबेको थियो र हजारौं मानिसहरु लाई बसाई दिनु परेको थियो। वर्षौंपछि, एउटा जलाशयको पुनःप्रस्थापनको प्रस्ताव गरियो जुन ठूलो विरोधको बाबजुद २१ औं शताब्दीको शुरुका वर्षहरूमा आधिकारिक बनाइएको थियो।
बाँध आफै येसाबाट 400०० मिटर पर छ। यो सिधा डिजाइन गुरुत्वाकर्षण बाँध हो जुन आधारमा कंक्रीटको साथ छ। यसको सतह स्पिलवे र चार गहिरा मुखहरू छन् जसमा बहु नालीहरू छन्। एउटा सेवन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान्टको लागि हो र अर्को बारडेनास नहरमा सेवा गर्दछ। यसैले बाँध 400०० मिटर लामो र करिब meters 75 मिटर अग्लो छ।
यो जलाशयमा दुई हजार हेक्टेयर मात्र छ यो अर्दोन नदीको बेंसीमा छ र यो बेर्दनको खोलामा छ। छ 18 किलोमिटर लामो र एक Kilome 48 किलोमिटर तटरेखा। यो त्यहि हो जहाँ साइटले प्रदान गर्ने सबै गतिविधिहरू केन्द्रित छन्। यो हामीलाई प्रदान गर्दछ।
येसा जलाशयमा पर्यटन
यो जलाशय यति सुन्दर छ, निलो र हरियो प्याच, कि यसलाई कल गर्ने कसैको कमी छैन पाइरेनीस सागर। धेरै प्रस्ताव गर्दछ पानी खेल, माछा मार्ने (त्यहाँ ट्राउट, लार्जमाउथ बास र कार्प छन्), र पाइन जंगल, पित्त फलाँट र बीच बीचमा एक सुन्दर सेटिंग।
तपाईं संग भाग्य छ कि तपाईं संग धन्य हो प्रति वर्ष धेरै घण्टा धूपउदाहरण को लागी, यो Pamplona भन्दा sun ० दिन बढी धूप छ, जो लगभग kilometers० किलोमिटर टाढा छ। तपाईं सक्नुहुन्छ बारमा टहलca, गर्नुहोस् windsurf यहाँ उड्ने हावाहरूको फाइदा लिन नवर्राको सबैभन्दा ठूलो नाविक क्षेत्रमा। र यो यो हो कि हावा दक्षिणबाट धेरै जसो प्रायः नै रहन्छ, तर त्यस्ता समयहरू छन् जुन उत्तरी बतास अत्यन्तै कडासँग आउँदछ, बलिया स्तर श्रेणी reach सम्म पुग्ने झुम्साहरू सहित।
यदि खेल तपाईंलाई दिइएन भने, त्यहाँ राम्रो अवसरहरू छन् ट्रेकिंग वा अन्य बाहिरी गतिविधिहरूको आनन्द लिनुहोस्। तपाईंले सहरहरूको इतिहासको बारेमा सुन्नुहुनेछ जुन जलाशयले बिर्सेको छ, र उदाहरणको लागि, तपाईं शहरको बाँकी रहेको ठाउँमा हिंड्न सक्नुहुन्छ। उसले स्क्यान गर्यो। यो राष्ट्रिय राजमार्गको छेउमा हो, प्याम्पलोना र जाका बीच, र यद्यपि केही मानिसहरू त्यहाँ बस्छन्, तिनीहरू एक हातका औंलाहरूमा गनिन्छन् र सबैकुरा छ। बर्बाद
बाँध र जलाशयको निर्माणको बेला राज्यले घरहरू किने र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई निम्तो दिए। र तिनीहरूले त्यसो गरे, यी केहि मानिसहरू र तिनीहरूका सन्तानहरू बाहेक जो अझै भग्नावशेषहरू पुनर्स्थापित गर्ने सपना देख्छन्। हामी हेर्ने छौं यदि तिनीहरू भाग्यशाली छन् भने। ईतिहासको समान प lines्क्तिहरू साथ छन् रुस्टा र टियरमास शहरहरू। यस अन्तिम सहरका बासिन्दाहरूले एस्केका बासिन्दाहरूको जस्तै सपना देख्छन्, जहाँ उनिहरू आज बस्छन्।
यदि तपाईं सेप्टेम्बर देखि त्यहाँ जान र पानी स्तर कम छ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रोमन स्नानको भग्नावशेष र गन्धक पानी को वसन्त प्रवेश। छिमेकी शहर, तपाईं अझै हुनुहुन्छ?, केहि वर्ष अगाडि टेरमेर्स के के बाँकी छ किनेको छ र यसलाई पुनर्जीवित गर्न र एक स्पा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, तर परियोजना कुनै विवादको बिना गरिएको छैन।
अर्कोतर्फ रुएस्टा, एउटा शहर जुन १ 1965 .XNUMX मा हरायो जब यसको 368 80 बासिन्दाहरू थिए। प्रख्यात क्यामिनो डि स्यान्टियागो यहाँबाट बित्छ जब यो एरागोनको भूमिबाट यात्रा गर्दछ तर दुर्भाग्यवस यो पुरानो इतिहास हो। यद्यपि रुस्ताको अर्को कथा थियो किनकि १ XNUMX s० को दशकमा यो संघको हातमा पर्‍यो, सीजीटी। यद्यपि यसको पुनर्स्थापना गर्ने विचार थियो, यस परियोजनाले युनियनका कफर्सहरूलाई पार गर्‍यो, त्यसकारण यसले क्याम्पिनो डे स्यान्टियागो पुन: प्राप्ति गर्न र केही दुईवटा इन्स निर्माण गर्न क्याम्पसाइटबाट शुरू भयो।
अर्को तर्फ तपाईं मार्फत जान सक्नुहुन्छ Roncaleses को पुल ११ औं शताब्दीको अन्त्यबाट, XNUMX० मिटर लामो र दुई र आधा चौडाईको साथ। छ मूल रोमन मेहराबहरु र यदि तपाईंलाई इतिहास मनपर्दछ भने अरबीहरू यहाँ लडाईंको क्रममा लडेका थिए।
तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ संगेसा, जेभियरको महल जहाँ सान फ्रान्सिस्को जेभियर जन्म भएको थियो वा Leyre मठ, एक सुन्दर मध्यकालीन साइट जहाँ ग्रेगोरियन ध्वनि गर्दछ र तपाईंसँग यस भण्डारको शानदार दृश्यहरू छन्।
यो मठ एकै नामको हिमाल श्रृंखलाको फेदमा, जलाशयबाट पाँच किलोमिटर टाढा छ। यो छ नवरारे राजाहरूको चिहान र शान्त, मौन र लगभग जादुई ठाउँ। मठवासी चर्च यसको ११ औं शताब्दीको क्रिप्ट, गोथिक भल्ट र १ XNUMX औं शताब्दीको रोमन पोर्टिकोको भण्डार हो।
मठबाट २ meters० मिटर तथाकथित हो भर्जिनको फव्वारा, पिकनिक क्षेत्रको साथ, कार द्वारा आधा घण्टा हो सान विरीला फाउंटेन र माउन्ट एस्केलर नजिकैको पनि छ, जसको शीर्षबाट, लगभग १, meters०० मिटरमा, तपाईंसँग रिजर्भेयर र पाइरेनीसको सनसनीखेज दृश्य छ।
यदि तपाइँ लाईर मठ भ्रमण गर्ने विचार मन पराउनुहुन्छ भने, यी डेटा लेख्नुहोस्:
समय: प्रत्येक दिन बिहान १०:१:10 बाट साँझ। सम्म खोल्नुहोस्।
ग्रेगोरियन मन्त्रहरू सोमबार देखि शुक्रवार बिहान9बजे,7र साँझ 9: ० at मा सुन्न सकिन्छ; र आइतवार र छुट्टीहरू बिहान ११: .०, and र :05: ००।।
प्रवेशद्वारको मूल्य १२ यूरो छ।
त्यहाँ खुल्ने घण्टाको समयमा निर्देशित भ्रमणहरू छन्। नि: शुल्क यात्राको लागी adult युरो प्रति वयस्क र निर्देशित एक,,, .० खर्च हुन्छ।
यो नाभरामा मठहरूको मार्गको अंश हो।
ठिक छ, तपाईंसँग Yesa Reservoir को बारे मा पहिले नै जानकारी छ। राम्रो यात्रा!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » Yesa जलाशय